Xirmooyinka Cunnooyinka Kirismaska ​​Bilaashka ah | Abuurista khadka tooska ah
Mid ka mid ah qaababka ugu isticmaalka badan ee loogu hambalyeeyo Kirismaska ​​ayaa ah retro / guridda, waana mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan uguna nadiifsan in lagu daro halabuurka noocan ah. Waxaan isku dayay inaan ku soo ururiyo xulashadan aan maanta kuu keenayo xirmooyin fallaadhiyeyaal iyo walxo bilaash ah oo laga soo dejisto (Dhexdeeda waxaad ka heli kartaa calaamado, calaamado, xaashiyo, tiirarka ...) si aad ugu adeegsato shaqadaada oo aad u tafatirto iyadoon wax dhibaato ah jirin. christmas vectors christmas vectors christmas dulinka
Dabcan waxaan kugu dhiirigalinayaa inaad isku daydo inaad raadiso xalka ugu haboon adoo kugu hagaya adiga gaar ahaan fikradahaaga. Naqshadaha waaweyn (iyo kuwa asalka ah) waxay u muuqdaan inay ka yimaadaan fikradahaaga ka dib markaad ka fikirto marar badan. Maskaxda ku hay in haddii aad maareyso inaad soo jiidato dareenka dadka kale, waxay ku mahadsan tahay sheeko sheeko, xeel dheer iyo cajiib ah. Fiiro gaar ah u yeelo midabada, qaabdhismeedka, dhismaha, iyo walxaha u muuqan kara wax aan qiimo lahayn (laakiin aan ahayn) sida meelo banaan.
Ugu dambeyntiina, waxaan idin xusuusinayaa in markii maqaalkan la qorayay, dhammaan waxyaabaha ku lifaaqan laga heli karo bogga kor ku xusan. Haddii aad isku daydo inaad marin u hesho iyaga oo aan hadda la heli karin, waxay noqon doontaa sababo ka baxsan xakamaynta Creativos khadka tooska ah. Sikastaba xaalku ha noqdee, hadaad wax dhibaato ah aad qabtid markii aad marin ka heleyso xiriiriyeyaasha, kaliya waa inaad nooga tagtaa faallo na ogeysiinaysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Xidhmada Bilaashka Vintage Christmas Vector